Vary mihodina OEM tsy miova vy manodina faritra fanamboarana orinasa sy mpamatsy | Ouzhan
OEM mihodina vy mihodina faritra namboarina
Ny fanodinana lathe dia mampiasa fitaovana mihodina indrindra hamadihana ny tontolon'ny asa mihodina. Drills, reamers, reamers, taps, maty ary fitaovana knurling dia azo ampiasaina amin'ny lathe ihany koa ho an'ny fanodinana mifanaraka amin'izany. Ny lathes dia ampiasaina indrindra amin'ny alàlan'ny masinina, kapila, tanany ary sangan'asa hafa misy faritra mihodina. Izy ireo no karazan'entana fanodinana fitaovana lehibe indrindra amin'ny orinasa mpamokatra milina sy fanamboarana. Ouzhan dia manome serivisy namboarina ho an'ny famolavolana ny vy mihodina ho an'ny mpanjifa sarobidy.
OEM mihodina vy faritra manodina faritra milina fanodinana
Ny singa fototra amin'ny vy tsy misy fangarony dia ny karbaona, ny chromium, ny nikela ary ny singa firaka sasany toy ny molibdenum, ny varahina ary ny azota. Ny singa mampifangaro indrindra amin'ny vy vy dia ny Cr (chromium), ary rehefa tonga amin'ny sanda iray ny atiny Cr, dia mahazaka fanoherana ny harafesina ny vy. Ny vy tsy misy fangarony dia manana toetra tena tsara toy ny tanjaka tsy manam-paharoa, ny fanoherana ambony, ny fanoherana ny harafesina ary ny fanoherana ny harafesina. Noho izany, dia be mpampiasa amin'ny indostria, milina sakafo, indostrian'ny electromekanika, indostrian'ny fitaovana ao an-trano sy ny haingon-trano, ny indostrian'ny famaranana. Ny fanodinana lathe dia ampahany amin'ny fanodinana mekanika.
Tombony amin'ny faritra mihodina vy vy Ouzhan any Shanghai
- Mora ny miantoka ny fahamendrehan'ny toerana misy ny faritra fikirakirana ny workpiece
- Mety amin'ny famitana ny vy tsy ferrous
Ouzhan China CNC Machining Service --- namboarina vy tsy miova vy manodina faritra fikarakarana accessories
Fitsaboana ambonin'ny tany Ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny vy tsy misy fangarony dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao, sary tariby, polishing, passivation ambonimbony, pickling, degreasing sy agents degreasing ary fanadiovana,
Fampiasana Hanodinana ireo faritra mihodinkodina isan-karazany, toy ny atin'ny varingarina anatiny sy ivelany, ny tampony sy ny atiny ivelany, ny kofehy, ny lakan-drano, ny faran'ny endriny ary ny fananganana azy, sns.
Previous: Fanamboarana varahina amin'ny faritra
Manaraka: Fanariana varahina
Mpanamboatra sinoa cnc fanao vy karbaona mi ...
Namboarina manokana vy mihodina faritra proces ...
Namboarina electroplated varahina manodina faritra pr ...